Iiseti zeJenereyitha, iiNdawo ezingasetyenziswanga zeSeti zeJenereyitha-Ukuthanda kwakho
Ukusasazeka kweNkunkuma yaManzi oLwandle
I-15kva-500kva evulekileyo / ethe cwaka kwiNdalo yeeJenereyitha zeGesi
Ukususwa / ukuhanjiswa kwetreyini Uhlobo lweDiesel Generator Set
5kw ukuwelda udizili generator iseti
Impompo yamanzi eChina
I-5kw evulekileyo / ethe cwaka yomoya opholileyo wedizili esetiweyo
I-5kw i-generator ye-diesel ine-Invent Patent, i-Design Patent kunye ne-Noise ingaphantsi kwe-70db (7m), umlingisi omkhulu akukho ukulahleka kwamandla nangemva kokusebenza ixesha elide, kwaye wamkela i-100% ye-alternator yocingo kunye neendawo zethu zokufumanisa ziqine kakhulu. Ngokumalunga nolondolozo olulula, sinokutshintsha ibrashi yekhabhoni ngaphandle ngqo. Ikhonteyina enye ilayisha iiseti ezili-144. yintoni enye, inamavili angama-360 °, anokuhamba simahla. Isilayidi esinyuswe phezulu ngaphakathi nangaphandle kwitanki yezibaso qinisekisa ukuba akukho kuvuza kwedizili.
10-1000kva Cwaka Uhlobo lweDiesel Generator Set
Cwaka uhlobo lwe-diesel generator ene-arc-emile istop ye-canopy inzuzo kukusebenza okuncinci kunye nesiqinisekiso sengxolo. I-Aslo enye into eyi-100% yocingo lobhedu. Samkela itanki yamafutha epinki ephezulu kunye neeyure eziyi-8 ngokuqhubekekayo. Uhlobo lwephepha lokucoca umoya luthathwe eKorea. Yintoni enye esisebenzisa inqanaba le-8 yesikhuselo esingothusayo. Kwaye indawo ebekwe kwangaphambili yefolokhwe (imodeli eyenziwe) yokuqinisekisa ngokulula emva kwenkonzo yokuthengisa.
Itreyila yohlobo lwenkunkuma esetiweyo inesandi esiphantsi sokusebenza kwengxolo kunye nomda wengxolo yi-75dB (A) (1m kude neyunithi) Uyilo olupheleleyo lweyunithi lubumbene kulwakhiwo, lincinci ngevolumu, kwinoveli kunye nokumila okuhle. Isikhuseli semaleko eyahlukeneyo yokungahambelani ngokungafaniyo nesigqubuthelo sesandi sokugquma. Kwaye uhlobo lokunciphisa ingxolo olusebenzayo oluninzi kunye nokukhutshelwa, ukutya kunye nokukhupha amajelo omoya, ukuqinisekisa ukusebenza kwamandla okwaneleyo kweyunithi. Sisebenzisa impedance enkulu silencer edityanisiweyo kunye nesixhobo esikhulu sokukhuphela ioyile. Ngaphezu, ipleyiti ekhethekileyo yokuvula ngokukhawuleza ilula kakhulu kulondolozo.
Umvelisi wenqaba yokukhanya osetwe ngoyilo oluhambelanayo noluphathekayo Kulula kakhulu ukuphathwa ngumsebenzisi omnye. Ilungele indawo yokusebenza encinci naphakathi. Sebenzisa uyilo lothutho oluninzi, ukusebenza ngokukuko ngokuchaseneyo kwaye unokusebenzisa ngokuthembekileyo kumaza aphezulu othusayo.Yamkela izinto zokukhanya kwendalo kunye nobuchwephesha bokutshiza ubuchwephesha, ukungena manzi, ukungabi nothuli, i-antirust kwaye kufanelekile ukusebenza kwindawo yangaphandle ixesha elide. Ukuhambelana ngokugqibeleleyo kwe-electromagnetic kwaye akunakubangela uphazamiseko kuthungelwano lokuhambisa; Isibane sonke sisebenzisa izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni zentsimbi, ezikumgangatho ophezulu kwaye zithembekile kwaye zisebenza kakuhle kwimeko enzima.
AMANDLA WAKHO NJENGAMANDLA (FUZHOU) CO., LTD., Ngomnye wabenzi be-OEM abambalwa e-China aqokelela uyilo lophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa kwinto enye, ukuya kuthi ga ngaphezulu kwe-30 yamalungelo awodwa omenzi wechiza, egxila kwimveliso yeeseti zejeneretha kunye nezinto zayo , Kwaye uneminyaka engaphezu kwama-30 yamava emveliso kwiindawo ezixhasayo .Inkampani iye yaqhubela phambili izixhobo zokuvelisa kunye neenkqubo zokuvavanya ngokupheleleyo, ineqela labasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobuchwephesha, kwaye unakho ukwenza izinto ezintsha. Iimveliso eziphambili zi-1-5 kw iiseti ze-generator zomoya opholileyo kunye ne-10-2000 kwiseti yomvelisi opholileyo ngamanzi.